Induction Brazing HAVC Amapayipi aneHigh Frequency Brazing Heater
Ikhaya / Izicelo / Induction Brazing / Induction Brazing HAVC Amapayipi
Categories: Induction Brazing, Umshini wokushisa wokufakelwa Tags: I-Brazing, ukubopha i-HVAC, ukubopha amapayipi we-HVAC, ubhontshisi wethusi, ithusi le-HVAC brazing, amapayipi ethusi abopha, I-HVAC, I-HVAC heater brazing, Imboni ye-HVAC, Amapayipi we-Induction Brazing HVAC, ukukhishwa kwe-hvac brazing, Induction i-HVAC heater brazing, Induction HVAC heater
Amapayipi we-Induction Brazing HVAC
Amapayipi esiqandisini ahlala efakwa njengoba ukubhinca kwenza ukuhlangana okuqinile okungavuzisi okumelana namazinga okushisa aphezulu naphansi kanye nengcindezi. Uma ufaka ipayipi lefriji kungcono ukusebenzisa i-solder enokwakheka kwesiliva kuyo njengoba imingcele yesiliva ithusi futhi yenza ukuhlangana okuhle kakhulu okuhlangene okuqinile (okuheha ama-capillary).
Ukukhishwa kwe-HLQ bangabachwepheshe ekusunguleni izixazululo zokushisa ezifakwayo ezenziwe ngokwezifiso zokubopha izingxenye ze-compressor, izinto zokushisa kanye nabasabalalisi bokushisa.
Ama-air conditioner anezingxenye eziningana ezifakwayo. Izinto ezivame kakhulu ithusi ne-aluminium:
Izingxenye ze-Aluminium, ngokwesibonelo ukuxhumeka kwe-evaporator kanye ne-condenser (tube-to-tube, tube-to-block, tube-to-tank)
Ama-Tube-to-fittings kuyunithi ye-condenser
Tube-to-fittings kuyunithi ye-evaporator
Tube-to-valves ezinhlelweni zokusabalalisa
Induction Brazing kufana noku-soldering ngaphandle kokuthi izinga lokushisa lingaphezu kuka-800 degreesF.
Okwethusi, ikhompiyutha yokubopha esetshenziswa kakhulu ibizwa kakhulu ngokuthi yi-sil-phos njengoba kubonwa ngakwesobunxele.
Kunezinhlobo eziningana zalesi sakhi.
U-15% Phosphorus / Copper / Silver Alloy wuhlobo olulodwa olusebenzisa u-15% wesiliva futhi luyindlela yobuchwepheshe bezinsizakalo olungisa imishini yefriji. . Akusebenzi kahle njengo-5%.
Kukhona ne-Phosphorus / Copper Alloy engenaso isiliva engiyithola ingenamsebenzi wokulungisa.
ICopper Brazing yeMboni yeHVAC
Amashubhu wethusi amaningi aboshwe ngabanikazi beMSI Automation ubuchwepheshe bokukhwabanisa bokungeniswaUkushisa kwe-induction ngobuchwepheshe obufanele be-induction heating coil technology kungabopha isiliva okuphindaphindayo kwethubhu yethusi kuphelela ekudutshulweni okukodwa. Le nqubo iqeda ukubopha isibani esiyisidina sesandla, ithuthukise ukungaguquguquki futhi inciphise nethuba lokuvuza kokuxhuma.
Ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe phakathi kweshubhu yethusi nomzimba wethusi kuqediwe. Isikhathi sokushisa sisebenzisa okhethekile weMSI ukufakwa kwe-coil yokushisa ingu-1/4 wemiklamo yekhoyili yethusi ejikelezayo ejwayelekile.
I-Induction Brazing Tube ye-Copper